RoboVac X80 sy HomeVac H30, filokana vaovao avy amin'ny eufy | Vaovao Gadget
Miguel Hernandez | 08/09/2021 17:03 | General, About us
Ny marika manam-pahaizana momba ny automatisation an-trano sy ny safidy ho an'ny eufy ao an-trano dia nanapa-kevitra ny hiditra amin'ny fidirana tanteraka amin'ny tsenan'ny banga miaraka amin'ilay safidy. RoboVac X80 izay antsoin'izy ireo ho mpanadio fantsom-pivoahan'ny robot mandroso indrindra eny an-tsena, sy ilay mpanadio vovo-tànana HomeVac H30, ho fantarintsika lalina izy ireo miaraka amin'ny antsipirihany sy ny toetrany vaovao.
RoboVac X80 no mpanadio banga robina voalohany manerantany izay ahitana haitao tsy misy fangarony roa
turbine, izay Manolotra motera 2 an'ny 2000Pa herin'ny suction. Izany dia mampitombo be ny tsindry mavitrika amin'ny robot, afaka manatsara ny fanangonana volo biby fiompy amin'ny 57,6% * miaraka amin'izay fotoana lany amin'ny fanadiovana tsara ary mandaitra amin'ny pass iray. Miaraka amin'ny RoboVac X80 Hybrid, azo atao ny manadio lalindalina kokoa miaraka amin'ny fiasan-dry zareo roa amin'ny famafana sy fametahana amin'ny fotoana iray. Ny tahan'ny fampiasana tanky maloto dia nitombo 127% *, nahatratra
mahazaka hatramin'ny 600ml.
*> Fampahalalana natolotry ny marika
Miara-miasa, teknolojia fizaran-tany laser iPath ary haitao mahomby amin'ny alàlan'ny
Artigence Intelligence (AI Map 2.0) mamorona sarintany marina amin'ny trano izay manampy ny robot hanisa a
fomba fanadiovana mahomby kokoa nefa tsy manadino zorony.
Ny faharoa amin'ireo zava-baovao natolotr'i eufy androany dia ilay mpanadio vovo tànana HomeVac H30,
izay manolotra fahaiza-manao isan-andro. Miaraka amin'ny rafitry ny TriPowerTM misy fahaiza-mitroka faran'izay betsaka,
mora ny mitazona tontolo madio, salama ary afaka amin'ny karazana allergen rehetra. Ny endriny
matevina sy maivana, marina Lanjan'ny 808 grama, mampahazo aina azy raha ampiasaina mandritra ny fotoana maharitra
fotoana rehefa mitsitsy toerana ho an'ny tanky maloto 250ml izay misy a
teknolojia fanosorana vovoka hanalana ny volo sivana mora kokoa.
Miankina amin'ny fonosana voafantina, ny HomeVac H30 dia mety misy kojakoja fanadiovana ny fiara, a
borosy maotera izay manamora ny fanadiovana ny volon'ny biby fiompy, ary ao amin'ny Kit tsy manam-petra, ny borosy ho an'ny
gorodona mafy izay mahavita mandroba sy mandetika amin'ny lalan-tokana.
Ireo maodely vaovao dia hovidiana any Espana amin'ny faran'ny volana septambra amin'ny
Amazon. Ny fianakaviana RoboVac X80 dia manomboka amin'ny € 499,99 ary ny modely X80 Hybrid dia mitentina € 549,99.
HomeVac H30 dia manana vidin'ny € 159,99, izay miovaova arakaraka ny kinova sy ny kojakoja ilaina
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » About us » RoboVac X80 sy HomeVac H30, filokana vaovao avy amin'ny eufy